Madaxda kooxda Man United oo iminka qoomamaynaya kaddib markii uu saddex caawin sameeyey xiddigii ay diideen inay la soo wareegaan ee Bruno Fernandes – Gool FM
Madaxda kooxda Man United oo iminka qoomamaynaya kaddib markii uu saddex caawin sameeyey xiddigii ay diideen inay la soo wareegaan ee Bruno Fernandes
(Manchester) 26 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa maamulkooda la soo sheegayaa inay iminkaba qoomamo dareemayaan kaddib markii laacibkii ay iska diideen saxiixiisa ee Bruno Fernandes uu saddex caawin sameeyey kulankii ugu dambeeyey.
Kubbad abuuraha xulka qaranka Portugal iyo kooxda Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes ayaa markale caalamka tusay sida uu u yahay xiddig sare iyo waxa uu sameyn karo kaddib markii uu saddex gool caawiyey kulankii ay kooxdiisu la dheeshay Naadiga Portimonense.
Qof waliba ayaa sawiran karay bil ka hor in Bruno uusan xilli ciyaareedkan cusub ku qaadan doonin kooxdiisa kaddib xiiso badan oo kaga imaanayey kooxo waa weyn oo ka dhisan qaaradda Yurub ee ay horboodayeen kuwa ka dheela horyaalka Premier League.
Waxa uu 24-sano jirkaan xiiso ka helayey kooxaha Premier League ee Manchester United, Tottenham iyo AC Milan, waxaana xusid mudan in naadiga Real Madrid la la xiriirinayey saxiixa laacibkan maalimihii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga Yurub.
Kooxda Manchester United ayaa ahayd kooxda inta ugu badan la la xiriirinayey laacibkan oo loo badinayey inay gacanta ku dhigi lahayd Fernandes, balse heshiiskaas uu ku aadi lahaa garoonka Old Traffrod ayaa gabi ahaanba burburay.
Yeelkeede, ciyaaryahankan Bruno Fernandes ayaa madaxda Man United iyo kooxihii kale oo doonayeyba tusay sida ay ugu qaldanaayeen inaysan la soo wareegin, kaddib markii uu caawiye ka ahaa dhammaan saddexdii gool oo ay kooxdiisu ka dhalisay naadiga Portimonense.
Si kastaba ha haatee, kooxda kaliya ee iminka haysata fursadda ay kula soo wareegi karto Fernandes ayaa ah kooxda Real Madrid oo weli uu u furan yahay suuqa kala iibiga, waxaan ay awoodi kartaa inay Lisbon siiso lacagaha 70-ka Milyan oo gini ee ay ku dalbanayso laacibkan si kooxda ka dhisan caasimadda Spain ay u hesho adeegga Bruno.
“Arsenal waxay leedahay awood kasta ay ugu guuleysan karto koobab” – David Luiz
Xiddiga kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne oo jabiyey rikoorka caawinta horyaalka Premier League